Ingebhe kuhlabeka iSilo sikaZulu - Ilanga News
Home Izindaba Ingebhe kuhlabeka iSilo sikaZulu
Ingebhe kuhlabeka iSilo sikaZulu
Kubikwa inkinga kashukela
SIQUBULE ingebhe isimo sempilo yeSilo sikaZulu, uZwelithini kaBhekuzulu okusabalale imibiko yokuthi singeniswe egunjini labagula kakhulu esibhedlela ngenxa yokuhlushwa wushukela ongalawuleki.
ILANGA lihabule ukuthi iMbube (esesithombeni) isiqede isonto lonke ingeniswe esibhedlela, odokotela bezama ukuthi ushukela wehle kodwa ungadambi, yaze yafakwa egunjini labagula kakhulu (ICU).
“Sithukile ngoba uBayede akasiye umuntu ohlala ngokuhlabeka, ukuhlala kwakhe esibhedlela kuze kuphele isonto, kusifaka amanzi emadolweni,” kusho umthombo.
Esitatimendeni sendlunkulu esikhiphe ngomlomo kaNdunankulu kaZulu, iNkosi Mangosuthu Buthelezi, sikuvezile ukuthi iNgonyama kayiphathekile kahle.
“Kuyinto eyaziwayo ukuthi iNgonyama iphila nesifo sikashukela, ushukela wayo uhlale uyobhekwa ngodokotela.
“Emasontweni ambalwa adlule ushukela wayo ubungekho esimeni esigculisayo yaphuthunyiswa esibhedlela saseZululand, ngeshwa yangalulama ngokugcwele.
“Iphindelile esibhedlela, odokotela babona kungcono ukuthi bayifake egunjini labagula kakhulu ngenhloso yokuyinika usizo oluthe thuthu.
“Le nkinga kashukela nabo odokotela sebeyiqaphe ngehlo lokhozi ngenxa yobungozi enabo, ikakhulukazi kulesi sikhathi esiphila kusona sokuhlasela kweCovid-19.
“Siyazi sonke ukuthi ongoti bathi uma unesifo sikashukela, usengozini enkulu kulo mkhuhlane.
“Sifisa ukuqinisekisa isizwe ukuthi iNgonyama inikwa usizo lwezempilo kulesi sifo sikashukela enaso ngisho nongqongqoshe wezempilo uyazi ngalolu sizo enikwa lona,” kusho iNkosi Buthelezi esitatimendeni.
Previous articleUgxeka ukuqashwa kosaziwayo ‘ukuhlobisa’
Next articleOkujabulisa umqeqeshi wePirates ngoweCaf